ᐈ 【3】 တွင် M2022U IPTV စာရင်းများကို ဖန်တီးနည်း - လွယ်ကူသည်။
လက်တင် IPTV စာရင်းများ
အခြား M3U စာရင်းများ
VLC တွင် M3U စာရင်းများကိုကြည့်ပါ။
Roku တွင် M3U စာရင်းများကိုကြည့်ပါ။
GB WhatsApp Delta APK ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
BlackMart APK နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း
Spotify ပရီမီယံမွမ်းမံမှု APK
Deezer Premium MOD ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
MX Player Pro ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း
Tinder Gold Mod APK ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
အကောင်းဆုံး M3U IPTV စာရင်းများ 2022
IPTV သည် ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ကြီးစွာသော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ထွန်းကားခဲ့သော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဤခရီးလမ်းတွင်၊ ၎င်းသည် များစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် streaming ဖျော်ဖြေရေးပလက်ဖောင်းတိုင်းနီးပါးသည် M3U စာရင်းများကိုဖန်တီးရန် ဤပရိုတိုကောကိုအသုံးပြုသည်။
IPTV နှင့် M3U စာရင်းများကို သင်မသိသေးပါက ဤပို့စ်သည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖျော်ဖြေရေးတွင် ပေးဆောင်သည့် ရွေးချယ်မှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ IPTV ဆာဗာများသို့ ပေါင်းထည့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် M3U စာရင်းများကို ဖန်တီးနည်းကို ခံစားနိုင်ရန် ဤပရိုတိုကောနှင့်ပတ်သက်သည့် အရာအားလုံးကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
M3U အလုပ်လုပ်ရန် မည်သည့်နည်းပညာကို အသုံးပြုသနည်း။
M3U စာရင်းတွင် မည်သည့်အကြောင်းအရာကို ခံစားနိုင်မည်နည်း။
IPTV ချန်နယ်စာရင်းများသည် အဘယ်နည်း။
IPTV နှင့် Streaming အကြား ကွာခြားချက်များ
ပရိုဂရမ်များဖြင့် M3U IPTV စာရင်းကို ဖန်တီးနည်း
M3U IPTV စာရင်းများကို notepad ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး ချန်နယ်များကို တည်းဖြတ်နည်း
IPTV M3U မက္ကဆီကို အွန်လိုင်းစာရင်းတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။
IPTV စာရင်း - M3U မက္ကဆီကို
မက္ကဆီကိုမှ M3U ရုပ်ရှင်စာရင်း
အကောင်းဆုံး မွမ်းမံပြီး အခမဲ့ M3U စာရင်းများ
IPTV စာရင်းများ - စပိန်၏ M3U နှင့် အားကစား
IPTV စာရင်းများ - လက်တင်နှင့်ကမ္ဘာ M3U
IPTV စာရင်းများ - ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများ၏ M3U
Qviart Combo V3 တွင် M2U စာရင်းများကို မည်သို့တင်ရမည်နည်း။
SS IPTV တွင် M3U စာရင်းများကို ထည့်သွင်းနည်း
SS IPTV တွင် စာရင်းတစ်ခုကို အဘယ်ကြောင့် ဖန်တီးရသနည်း။
လက်တင် iptv စာရင်း
Whatsapp Delta နောက်ဆုံးဗားရှင်း
M3U ဖော်မတ်သည် မည်သည့် စာသားတည်းဖြတ်မှုဖြင့်မဆို ဖွင့်နိုင်ပြီး တည်းဖြတ်နိုင်သည့် ပြားချပ်ချပ်ဖိုင် ဖိုင်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ဥပမာ၊ Windows notepad ။ M3U သည် “MPEG ဗားရှင်း 3.0 URL” အတွက် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
¡ ဤဖိုင်အမျိုးအစားကို မီဒီယာဖွင့်စာရင်းများ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များဖန်တီးရန် သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
၎င်း၏အစတွင်၎င်းကို Winamp ကသာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော်လည်းယနေ့တွင်၎င်းကိုကစားသမားအမြောက်အမြားမှပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။s၊ ၎င်းသည် အစီအစဉ်များဖန်တီးရာတွင် စံတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။
M3U စာရင်းတွင် လုပ်ဆောင်သည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကစားလိုသော မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များအားလုံး၏ တည်နေရာကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းများကို ဖန်တီးလိုသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမည့် သီးခြားစာရေးဖော်မတ်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဒါကို အောက်မှာ လေ့လာပါမယ်။
M3U စာရင်းများကို နှစ်သက်ခံစားရန် အကြောင်းအရာ၏ ဝေးလံခေါင်သီသော တည်နေရာဖြစ်သည့် ဝဘ်လိပ်စာများ အတွဲလိုက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သင်သည် ပရီမီယံပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာမှမဆို ချန်နယ်အပြည့်အစုံကိုပင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။၎င်းတို့သည် ပြည်တွင်း၊ အမျိုးသားဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာဖြစ်စေ မသက်ဆိုင်ပါ။
M3U စာရင်းတစ်ခု အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်၊ ၎င်းကို ဤဖိုင်အမျိုးအစားကို ပံ့ပိုးသည့် မီဒီယာပလေယာသို့ ပေါင်းထည့်ရပါမည်။. လက်ရှိတွင်၊ မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာကိုဖွင့်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် မည်သည့်အက်ပ် သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်မဆိုနီးပါးသည် ဤဖိုင်ဖော်မတ်ကို အခက်အခဲမရှိဘဲ ဖွင့်နိုင်သည်။
ဤစာရင်းအမျိုးအစားများသည် ၎င်းတို့ကို အဝေးမှ အဆက်မပြတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် အားသာချက်ရှိသည်။ဤနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အများဆုံးနှစ်သက်သော မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများ၏ ဒေတာကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် URL များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
စပိန်3ရှိ IPTV အတွက် အကောင်းဆုံး M2022U စာရင်းများ
ထိပ်တန်းလက်တင် M3U စာရင်းများ 2022
Kodi အတွက် M3U စာရင်းများကိုဖန်တီးနည်း
Roku တွင် M3U စာရင်းများကိုမည်သို့ကြည့်ရှုနည်း
Plex တွင် M3U စာရင်းများထည့်နည်း
OTTPlayer တွင် M3U စာရင်းများထည့်နည်း
VLC တွင် M3U စာရင်းများကိုမည်သို့ကြည့်ရှုနည်း
M3U စာရင်းတွင် သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သော မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို ပါဝင်နိုင်သည်။ မတူကွဲပြားသောချန်နယ်များ၏ သီးသန့်စာရင်းများ သို့မဟုတ် ဒေသတစ်ခု သို့မဟုတ် နိုင်ငံတစ်ခု၏ သီးခြားချန်နယ်များဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ခြင်း။.
ထိုနည်းတူစွာ, ရုပ်ရှင်များ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များကို သင့်မိခင်ဘာသာစကား သို့မဟုတ် အခြားဘာသာစကားများဖြင့် ရှာဖွေ သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ဤအကြောင်းအရာတစ်ခုစီအတွက် စာတန်းထိုးများကိုပင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ပြည်တွင်းဖိုင်များကို M3U အစီအစဉ်တစ်ခုဖြင့် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး၊ သို့မှသာ သင်သည် ကစားရန်အမှာစာများကို စုစည်းနိုင်ပြီး မည်သည့်စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် မီဒီယာပလေယာတွင်မဆို သင့်အစီအစဉ်များကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
M3U စာရင်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆို သို့မဟုတ် မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာပလေယာများမှတစ်ဆင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုနိုင်သော ဖျော်ဖြေမှုကို ခံစားနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် M3U စာရင်းများကို မည်သည့်နေရာနှင့် မည်သို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြပါမည်။
IPTV စာရင်းတွင် စပိန်
M3U စာရင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ဦးစွာသင်သွားရပါမည်။ ဒီ link ကိုထို့နောက် သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ဖြင့် ရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်တွင် ၎င်းမရှိပါက ခလုတ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်သည်။ "သီချင်းဆိုပါ" ဒါမှမဟုတ် ပိုမြန်အောင်လုပ်ဖို့ Google၊ Facebook နဲ့ Twitter ရဲ့ ပလပ်ဖောင်းတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
စာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလိုသည့်စာရင်း၏အမည်ကို ရှာဖွေရေးဘားသို့သွားပါ။ ရှေ့ဆက်ကို အမြဲထည့်ထားဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ "အိုင်ပီတီဗွီ" o "M3U" ထို့ကြောင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤစာရင်းအမျိုးအစားများထံ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော စာရင်းများကို ရှာရန် ဟူသော ဘောက်စ်ကို သွားပါ။ "ဆက်စပ်မှု" နှင့် option ကိုရွေးချယ်ပါ "ရက်စွဲ" ထို့နောက် နောက်ဆုံးစာရင်းများ ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့တစ်ခုလုံးတွင် လုပ်ဆောင်နေနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သင်နှစ်သက်သည့်စာရင်းကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ပြီး လိပ်စာဘားတွင် ပေါ်လာသည့် လိပ်စာကို ကော်ပီကူးရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းသည် သင်၏ IPTV အပလီကေးရှင်းတွင် သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုနေသည့် မာလ်တီမီဒီယာ အကြောင်းအရာပလေယာတွင် သင်ကူးယူမည့် URL ဖြစ်သည်။.
သင်ထည့်သွင်းနိုင်သော IPTV သို့မဟုတ် M3U စာရင်းများ၏ အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်များနှင့် ကစားသမားများအကြောင်း သိလိုပါက၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြားထည့်သွင်းမှုများကို စစ်ဆေးပါ။
ယခု၊ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုဖော်ပြခဲ့သော သင်ခန်းစာသည် M3U စာရင်းများကို ရှာဖွေရန် ရေပန်းအစားဆုံး စာမျက်နှာတစ်ခုအတွက် အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ၎င်း၏ အမျိုးအစားရှိ တစ်ခုတည်းသော ဝဘ်ဆိုဒ်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါစာရင်းသည် သင့်အကောင်းဆုံး M3U စာရင်းများကို ရှာဖွေရန် အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။
stratustv: ၎င်းသည် သင့်အား အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းကစားနိုင်သည့် M3U ဖော်မတ်ဖြင့် စာရင်းများကို ပြသထားသည်။ စာရင်းများကို နိုင်ငံအလိုက်နှင့် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် စီစဉ်ပေးပါသည်။ စာရင်းတစ်ခုစီတွင် အရသာတိုင်းနှင့် အသက်အရွယ်အလိုက် ကွဲပြားသော အကြောင်းအရာချန်နယ်များရှိသည်။
IPTVSRC: ဤစာမျက်နှာတွင် နေ့စဥ်မွမ်းမံထားသောစာရင်းများကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဘာသာစကားမျိုးစုံအပြင် မည်သည့်အသက်အရွယ်အတွက်မဆို ချန်နယ်များ၊ စီးရီးများနှင့် ရုပ်ရှင်များတွင် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးဖြင့် M3U တွင် စာရင်းများကို ပေးဆောင်ထားသည်။ စာရင်းတစ်ခုစီတွင် ထပ်လောင်းတန်ဖိုးတစ်ခုအနေဖြင့် HD ချန်နယ်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
မင်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ် တကယ်တော့ ဒါဟာ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုပါ။ သို့သော် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ link ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော M3U စာရင်းများ ဆက်တိုက်ပြသသည့် ဝင်ခွင့်တစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို မှာကြားထားသောကြောင့် ၎င်းသည် မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားဖြစ်သည်ကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
APK အားလုံး- ဤဘလော့ဂ်တွင် အသစ်မွမ်းမံပြီး လုံးဝအခမဲ့စာရင်းများ ဆက်တိုက်ပါရှိသော ဝင်ခွင့်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့ရရှိရန် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီမှာ.
Fluxus.TV: ဤဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အမြဲတမ်း မွမ်းမံနေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အမှားအယွင်းမရှိဘဲ ပြန်ထုတ်ပေးရန် အသင့်ဖြစ်နေသော M3U ဖော်မတ်ဖြင့် စာရင်းများကို အကန့်အသတ်မရှိ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာသည် အတော်လေး ကွဲပြားပြီး စီးရီးများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် ချန်နယ်များကို မည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်မဆို ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
IPTV သည် Internet Protocol Television ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် Streaming မှတစ်ဆင့် မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကို ထုတ်လွှင့်ရန် IP ပရိုတိုကောနှင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုသည့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ချန်နယ်များ၊ စီးရီးများနှင့် ရုပ်ရှင်များကို broadband ကွန်ရက်တစ်ခုမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်ရန် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။
ဘရော့ဒ်ဘန်းကွန်ရက်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် အင်တင်နာများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ IPTV သည် အခြေခံအားဖြင့် အွန်လိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်သည့် ချန်နယ်များစာရင်းဖြစ်ပြီး မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတိုင်းတွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ဤစာရင်းများကို မည်သည့် မာလ်တီမီဒီယာ အကြောင်းအရာ ပလေယာ အပလီကေးရှင်းတွင်မဆို တင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
IPTV ပလပ်ဖောင်းများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည့် စာရင်းအမျိုးအစားတစ်ခုရှိပြီး ၎င်းတို့သည် M3U တိုးချဲ့မှုများဖြင့် ဖန်တီးထားသူများဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေအကြောင်းနဲ့ IPTV ကတစ်ဆင့် ငါတို့ကိုယ်ပိုင်စာရင်းတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
IPTV သည် အကြောင်းအရာများကို ကြည့်ရှုခံစားရန် အော်ပရေတာတစ်ဦးကို ငှားရမ်းရန် မလိုအပ်ဘဲ စီးပွားရေးချွေတာမှုအတွက် များစွာအကျိုးရှိသော အပိုအသုံးစရိတ်များမှ ကင်းဝေးစေသောကြောင့် IPTV သည် အလွန်ရေပန်းစားပါသည်။ ထိုသို့မအောင်မြင်ပါက IPTV သို့မဟုတ် M3U စာရင်းများမှတစ်ဆင့် IPTV ကိုခံစားနိုင်သည်။
IPTV စာရင်းကို ဝဘ်မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် မတူညီသော ချန်နယ်များ သို့မဟုတ် IPTV များကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အဝေးမှ IP လိပ်စာများကို အသုံးပြုခြင်း။
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလေ့ရှိသော IPTV စာရင်းများသည် M3U ဖော်မတ်ဖြင့် လာပါသည်။မျှမျှတတ universal ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မာလ်တီမီဒီယာပါဝင်သည့် ပလေယာအများစုနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ IPTV စာရင်းများကို M3U8 သို့မဟုတ် W3U ဖော်မတ်ဖြင့် သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် IPTV နှင့် streaming နှစ်ခုလုံးသည် အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တူညီမှုများစွာရှိသော်လည်း၊ ဤဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက် ထူးခြားသောတန်ဖိုးကိုပေးဆောင်သည့် ကွဲပြားမှုအချို့ရှိပါသည်။
အသက်ဆိုင်ဆုံးကွာခြားချက်မှာ IPTV စာရင်းတစ်ခုသည် ဒေတာလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သောနည်းလမ်းဖြင့် နှစ်သက်စေသည့် သီးသန့်ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။. ဤအတောအတွင်း၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် အီးမေးလ်နှင့် ဝဘ်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့ တူညီသောအဖွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲမထားသော ကွန်ရက်သို့ ရောက်ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သီးခြားမဟုတ်သောကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည် ပိုမိုမြင့်မားသောချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်ချက်များ လိုအပ်သည်။IPTV စာရင်းသည် လိုအပ်ချက်များစွာကို မတောင်းဆိုသော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် အလွန်မြင့်မားသောအင်တာနက်အမြန်နှုန်းဖြင့် အကြောင်းအရာကို သင်ခံစားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် M3U စာရင်းတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက၊ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော M3U IPTV စာရင်းကိုဖန်တီးရန် မှတ်သားထားရမည့်ထူးခြားသော command structure တစ်ခုရှိကြောင်း ဦးစွာသိထားရပါမည်။
#EXTINF- (ကြာချိန်)၊ (အရည်အချင်းများ)၊ (ချန်နယ်ခေါင်းစဉ်)
ပရိုတိုကောတစ်ခုစီ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။
#EXTM3U- စာသား၏အစတွင်သာ ထားရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ဤအမိန့်စာသည် စာရင်းသည် တိုးချဲ့ M3U ဖော်မတ်ဖြစ်ကြောင်း ကစားသမားအား ပြောပြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတွင် အခြေခံ M3U စာရင်းတွင် မအောင်မြင်နိုင်သော အချို့သော ထပ်လောင်း attribute များ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
#EXTINF- ၎င်းသည် စာရင်းရှိ ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုစီမှ စတင်သည့် အပိုမက်တာဒေတာကို မည်သည့်နေရာတွင် ညွှန်ပြသည့် အမိန့်ပေးချက်ဖြစ်သည်။ ချန်နယ်တစ်ခုကို ပေါင်းထည့်လိုသည့်အခါတိုင်း ဤအမိန့်ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချန်နယ်ဆယ်ခုကို စာရင်းပြုစုပါက၊ ချန်နယ်တစ်ခုစီတွင် ဆယ်ဆသော command ပေါ်လာရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မည့် မာလ်တီမီဒီယာ၏ အချို့သော အရည်အချင်းများဖြင့်လည်း ပါ၀င်ပါသည်။ ၎င်းတွင်- ကြာချိန်၊ အရည်အချင်းများနှင့် ချန်နယ်၏ ခေါင်းစဉ်။
၎င်းတို့တစ်ခုစီကို နေရာလွတ်တစ်ခုဖြင့် ခြားထားရပါမည်။ ဒီ attribute တစ်ခုစီကို ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
ကြာချိန်- မေးခွန်းရှိ မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်၏ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တိုင်းတာသည့်အချိန်နှင့် ကိုက်ညီသည်။ PIPTV စာရင်းတစ်ခုအတွက် ကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုကိုသာ သိထားပြီး၊ တန်ဖိုး သုည (0) နှင့် တန်ဖိုးအနှုတ် (-1)၊.
ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လွှင့်မှုကြာချိန်ကို ပုံသေမသတ်မှတ်နိုင် သို့မဟုတ် မသတ်မှတ်နိုင်ဟု ကစားသမားအား ညွှန်ပြရန်အတွက် တန်ဖိုး -1 ကို အသုံးပြုရပါမည်။
ဂုဏ်ရည်များ- ၎င်းသည် ကစားသမားအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြသလိုသော နောက်ထပ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ဤဒေတာများသည် ပရိုဂရမ်းမင်းလမ်းညွှန်၊ ဆက်တင်များ၊ ချန်နယ်လိုဂို၊ ဘာသာစကားများနှင့် အခြားသော အရည်အချင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။သို့သော် ၎င်းသည် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်။
ချန်နယ်၏ ခေါင်းစဉ်လိုင်း- ကစားသူတွင် ပေါ်လာမည့် အမည်ကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် ကော်မာ (,) ၏ ရှေ့တွင်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မာနောက်တွင် နေရာလွတ်မရှိပေ။
URL: ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာရင်းထဲသို့ ထည့်လိုသော ချန်နယ်၊ စီးရီး သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ကို လက်ခံကျင်းပသည့် URL သို့မဟုတ် ဝဘ်လိပ်စာကို ညွှန်ပြပါမည်။
အလားတူ၊ ဒေသတွင်း မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်ကို လက်ခံကျင်းပသည့်နေရာ၏ လိပ်စာ သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းကို ဤနေရာတွင် ရေးထားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့်ဖိုင်ကို ဤနေရာတွင် ရေးထားသည်။
ဒါကို မင်းအခုမှသိတော့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များကို .m3u ဖော်မတ်ဖြင့် စတင်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည့် ပထမဆုံးအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်အရ စာသားတည်းဖြတ်ခြင်းကိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ အရင်က ဖော်ပြထားတဲ့ command protocol အတိုင်း ပြန်လည်ထုတ်လုပ်လိုတဲ့ link တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို စတင်ထည့်သွင်းဖို့ပါပဲ။ ၎င်းတို့ကို မှတ်မိရန်-
ပထမအမိန့်ကိုသတိရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ # EXTM3U ကို ပထမစာကြောင်းတွင် တစ်ကြိမ်သာ ထည့်သင့်သည်၊ ၎င်းကို ဤနေရာမှ ထပ်၍ မထည့်သင့်ပါ။. ဤ command များ ၏ ဥပမာ အချို့ ကို ကြည့် ကြ စို့ ။
#EXTINF-ပုံ-၁၊ နမူနာရုပ်ရှင် (၂၀၁၇)၊
#EXTINF-အမှတ်-၁၊ Star Wars Episode I၊
H: \_ PELICULAS \_ STAR WARS \_ Star Wars Episode I The Phantom Menace (1999).mkv
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုလိုသည့် ချန်နယ်များ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် ရုပ်ရှင်များအားလုံး၏လိပ်စာများကို ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို သိမ်းဆည်းရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဖိုင်တက်ဘ်တွင်၊ သင်သည် "Save as" option သို့သွားရပါမည်။ အောက်ပါဝင်းဒိုးကိုပြသသောအခါ၊ သင်သည် ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းမည့်နေရာကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပြီး အမည်ကဏ္ဍတွင် ဖိုင်ကိုပေးမည့်အမည်ကို ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ နာမည်ရဲ့အဆုံးမှာ extension .m3u ကို သေချာပေါက်ထည့်ပါ။.
အကယ်၍ သင်သည် ဤအချက်အလက်ကို မထည့်ပါက၊ သင်သည် ဤစာရင်းများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်လိုသော အပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့်စာရင်းကို မရနိုင်ပါ။
ယခု သင့်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်စာရင်းကို ဖန်တီးထားပြီး၊ ၎င်းကို သင်နှစ်သက်သော အက်ပ် သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်တွင် ထားရှိကာ ပျော်ရွှင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤစာရင်းကို ဤပြန်ဖွင့်ခြင်းပရိုဂရမ်များတွင် မည်သို့ထည့်ရမည်ကို မသိသေးပါက၊ M3U စာရင်းများကို အပ်လုဒ်လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျူတိုရီရယ်များကို သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
M3U စာရင်းတွင် အလွန်ကွဲပြားသော အကြောင်းအရာများ ပါရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိထားပြီးဖြစ်သည်။ IPTV မက္ကဆီကိုစာရင်း၏ကိစ္စတွင်၊ သင်သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအားကစား၊ သတင်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့်မှတ်တမ်းချန်နယ်အားလုံးကိုသင်ရှာနိုင်သည်။.
Channel 10 Chetumal
Azteca Uno HD ။
CableOnda Sports FC ။
IPTV သို့မဟုတ် M3U စာရင်းများတွင် သင်သည် မတူညီသောနိုင်ငံများနှင့် မတူညီသောဘာသာစကားများမှ ချန်နယ်များကိုတွေ့နိုင်ပြီး ၎င်းသည် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် မက္ကဆီကိုတွင်ရှိပြီး မက္ကဆီကန်ချန်နယ်များနှင့် ရုပ်ရှင်များစာရင်းများကို ရှာဖွေလိုပါက၊ သင့်အား အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေရေးများရရှိရန် ကူညီပေးမည့် စာရင်းကောင်းတစ်ခု ထားခဲ့သည်-
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် M3U ဖိုင်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးပေါ်နှင့် 3% အခမဲ့ဖြစ်သော အကောင်းဆုံး M100U စာရင်းများကို ရှာဖွေရန်သာ အာရုံစိုက်နိုင်ပါသည်။
တစ်ခါတရံမှာ ဒီစာရင်းတွေကို ရှာရတာ မလွယ်ပေမယ့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ရှာဖွေမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက်တွင် အဝေးမှ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော အကောင်းဆုံး M3U စာရင်းများကို သင့်အား ထားခဲ့ကာ အသုံးပြုခွင့်သည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်.
Qviart Combo V2 သည် DVB-T2 နှင့် DVB-S2 စံပံ့ပိုးမှုပါရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂြိုလ်တုနှင့် TDTHD ဒီကုဒ်ဒါ သို့မဟုတ် လက်ခံသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်စွာထုတ်လွှင့်ပြီး ၎င်း၏ USB အပေါက်နှစ်ခုအနက်မှမဆို အသံဖမ်းယူရာတွင် အဆင်ပြေစေကာ ၎င်း၏ 1080p FullHD အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကြောင့် ထူးခြားသောရုပ်ပုံအရည်အသွေးရှိသော Media Player တစ်ခုလည်းပါရှိသည်။
ဖျော်ဖြေရေးခံစားရန်၊ သင်သည် သင်နှစ်သက်သောချန်နယ်များကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင် စာရင်းများနှင့် ချန်နယ်အလိုက် ချန်နယ်အလိုက် ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်-
ပထမဦးစွာ၊ အရန်စာရင်း သို့မဟုတ် ချန်နယ်များ၏ အရန်ကူးခြင်းကို ပြင်ဆင်ပါ၊ ထို့နောက်-
သင်၏ pendrive ကို ချန်နယ်များနှင့်အတူ ထည့်သွင်းပြီး USB ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။
အဝါရောင်ခလုတ်ကို ရွေးပါ "ဒေတာကို တင်ပါ။"။
စက်ပစ္စည်းသည် “¿ မေးခွန်းပုံစံနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် သင့်အား မေးလိမ့်မည်။အထက်?” နင်က အဲဒါကို ပြန်ဖြေတယ်”SI"။
ရန်အချိန် "စာရင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ"ဖိုင်ကို ဇစ်ဖွင့်လိုက်ပါ။
ကုဒ်ဒါတွင် pendrive ကို ထည့်သွင်းသောအခါ၊ သင်သည် ချန်နယ် 1 မှ ရောက်သွားပါသည်။ Menu > Expansion > USB Menu.
စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သင်သည် မီနူးမှထွက်နိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းကို အဝေးထိန်းခလုတ်မှ ပိတ်ပြီးနောက် ၎င်း၏ပိတ်ခလုတ်မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်မိနစ်အကြာတွင် ၎င်းကို ထပ်မံစတင်သောအခါ၊ M3U စာရင်းကို သင်၏ Qviart Combo V2 တွင် တင်ထားသင့်သည်။
မှတ်ချက်: ၎င်းကို မွမ်းမံမွမ်းမံပါက၊ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ သင့်တွင်ချန်နယ်တစ်ခုကျန်နေပါက၊ သင်သည် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာနိုင်ပါသည်။
ပထမအဆင့်မှာ IPTV option ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် အောက်ပါစခရင်ကို သင်မြင်ရလိမ့်မည်-
ထို့နောက် အနီရောင်ဖြင့် ရှိသော option ကို ရွေးပါ "ပေါင်း"ချန်နယ်အသစ်တစ်ခုထည့်ရန်။
မူရင်းစကားဝှက်သည် 0000 ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ရိုက်ထည့်ပြီး ဆက်လုပ်ပါ-
သင်သည် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ချန်နယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်-
ပုံ URL- အမိန့်ပေးသည့် ညာဘက်မြှားကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ချန်နယ်အိုင်ကွန်ဖြစ်မည့် ပုံတစ်ခုဖြင့် URL ကို ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
ဗီဒီယို URL- ညာဘက်မြှားကို နှိပ်သည့်အခါ သင်တွေ့ရမည့် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာမှာ IPTV တွင် ရွေးချယ်ထားသော ချန်နယ်၏ URL ကို ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ချန်နယ် URL ကို ထည့်သွင်းပြီး OK ကို ရွေးပြီးနောက်၊ ချန်နယ်ကို စတင်၍ အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။
ချန်နယ်တစ်ခုစီသည် 45 စက္ကန့်ခန့်ကြာသည်။
ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုစီ၏အဆုံးတွင်၊ ကနဦးစာမျက်နှာတွင် အကွက်တစ်ခုပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ချန်နယ်များမှ ပုံများထည့်သွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သင်မြင်ရသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ပုံများဖြင့် မထည့်ထားပါက၊
6. ပုံများထည့်ရန်၊ “ဟုပြောသော အပြာရောင်ခလုတ်ကို ရွေးပါ။ပြင်ဆင်ရန်"။
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့် သင်သည် သင်၏ Qviart Combo V2 တွင် သင့်စိတ်ကြိုက်ချန်နယ်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းရန် အဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် လိုက်နာရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ SS IPTV ရှိ M3U စာရင်း:
လျှောက်လွှာကိုသွားပါ SSIPTV သင်၏စမတ်တီဗီပေါ်တွင်။
အောက်ပါ dialog box ပွင့်လာပါမည်-
3. ကိုရွေးချယ်ပါ။ setting များကိုမြှားညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၊
အောက်ပါ မျက်နှာပြင် ပေါ်လာပါမည်-
ထို့နောက် သင်သည် ချိတ်ဆက်မှုကုဒ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရပါမည်။ ရွေးစရာကို ရွေးပါ။ ကုဒ်ရယူပါ (မြှား 1) နှင့် သင်ကူးယူရမည့် အက္ခရာဂဏန်း ကုဒ်ကို ဖန်တီးလိမ့်မည် (မြှား 2)။
ယခုတရားဝင်စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ SSIPTV နှိပ်ခြင်းဖြင့် သင့် browser မှ aquí။
ကုဒ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာ ထည့်ပါ။ ချိတ်ဆက်မှုကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ (နောက်ပုံတွင် မြှား 1 )။
ကို Select လုပ်ပါ ကိရိယာထပ်ဖြည့်ပါ (မြှား ၂)။
ဤစာမျက်နှာသည် ၎င်းပြောထားသည့်နေရာကို သင်ရှာဖွေရမည့်နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပဖွင့်စာရင်း နှင့် ရွေးချယ်ပါ။ ပစ္စည်းထည့်ပါ။.
ပေါ်လာသော ဝင်းဒိုးတစ်ခု ပွင့်လာလိမ့်မည်။
ဤအရာတွင် သင်သည် အောက်ပါဒေတာကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
ပြထားသော အမည်- အမည်စာရင်း။ ဥပမာ- ကျွန်ုပ်၏ M3U စာရင်း
source: သင်တင်လိုသော M3U စာရင်း၏ URL။
ကို Select လုပ်ပါ OK.
ပေါ်လာသော ဝင်းဒိုးသည် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်စရာကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဒေတာကို သိမ်းဆည်းရမည့်နေရာတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ SmartTV ၏ အက်ပ်လီကေးရှင်းတွင် ရှိပြီးသား အချက်အလက်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် အိုင်ကွန်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ပြန်တင် မီနူး၏ အပေါ်ညာဘက်တွင်
ယခုမှစ၍ သင့်ကိုယ်ပိုင်လင့်ခ်မှ ချန်နယ်အားလုံးကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးပါပြီ အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။ SS IPTV ရှိ သင်၏ M3U စာရင်း.
ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြင့် မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို ချမှတ်နိုင်စေရန်နှင့် မလိုအပ်သောဖိုင်များကို ဖယ်ရှားပစ်ရန်၊ သို့မဟုတ် အသစ်များကို ပေါင်းထည့်နိုင်စေရန်။ ထိုနည်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို တစ်ဦးချင်းထည့်ရန် အခက်အခဲကို သင်ကိုယ်တိုင် သက်သာစေပါသည်။
ForkPlayer Smart-TV တွင် ForkPlayer ကိုအသုံးပြုသည့်ကိစ္စတွင် စာရင်းတစ်ခုစီကို စက်သို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမည် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး "ကျွန်ုပ်၏အကောင့်" တွင် သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးသော မှတ်စုအနေဖြင့် သင်သည် သီချင်းနားထောင်ရန်ဖြစ်ပြီး သင့်တွင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ကောင်းမွန်ပါက၊ သီချင်းစာရင်းကို သိမ်းဆည်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကို ပလေယာ၊ မိုဘိုင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် PC သို့ တင်ရန်သာ လုံလောက်မည်ဖြစ်သည်။
WhatsApp Plus (AntiBan) APK ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Videoder Premium Apk 2022 ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
YouTube Music Premium APK ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အခမဲ့ IPTV စာရင်းများ (2022 အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်)
Ticky Player စာရင်းများ
Kodi တွင် IPTV စာရင်းများကို မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။
© 2022 MtresU •ဖန်တီးထားသည် GeneratePress